Shanta hay'adaha sirdoon ee ugu awodda badan caalamka - Caasimada Online
Home Dunida Shanta hay’adaha sirdoon ee ugu awodda badan caalamka
Shanta hay’adaha sirdoon ee ugu awodda badan caalamka
Khubarada dhanka ammaanka marka ay ka hadlayaan sugidda ammaanka dal ayaa waxa ugu horeeya ee ay ku taliyaan waxay tahay helidda hay’ad sirdoon oo awood leh. Sababtaas ayay dalalka dunida dhaqaalaha ugu badan ugu bixiyaan casriyenta iyo horumarinta awoodahooda sirdoon iyo xog-helid.
Sirdoonka waxaa uu ka mid yahay waxyabaha udub dhaxaadka u ah dal walba islamarkaasna xogaha dibadda iyo gudaha ee ay keenaan ayaa lagu saleeyaa danaha qaranka iyo sugidda amniga.
Hay’adda sirdoonka qaranka waa difaaca ugu horeeya ee qaran uu leeyahay, waana hay’adda u qaabilsan helista xogaha qarsoon, iyo hagarmaadooyinka loo maleygayo dal, laakiin dalalka oo dhan ma noqon karaan isku-awood dhaqaale iyo sirdoon. Haddaba, waayo shanta hay’adood ee ka mid ah kuwa ugu awoodda iyo saameynta badan dhanka sirdoonka caalamka.
1. Sirdoonka Mareykanka ee CIA
Hay’adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa waxaa la asaasay sanaddii 1947. Waxa ay hay’addan sirdoon xirfad ahaan si aad ah uga sareeysa hay’ado badan oo caalamka ah islamarkana waxaa ay wax badan ka og yihiin dhacdooyiinka caalamka ka dhaca.
Hay’adda CIA ayaa dowlad Mareynkanka u qaabilsan ururinta xogaha sirdoon ee dibada, iyo mararka qaar gudaha. Si rasmi ah looma shaacin tirada shaqaalaha sirdoon ee hay’addan, laakiin waxaa la rumeysan yahay inay ka mid yihiin kuwa ugu awoodda badan, uguna dhaqaalaha sareeya sirdoonka caalamka. Hay’adda Sirdoonka CIA waxaa agaasime ka ah William J. Burns.
2. Hay’adda sirdoonka Israel, Mossad
Hay’adda Mussaad waa hay’adda sirdoonka Israa’iil waana hay’ad aad u awood badan.
Mossad ayaa waxaa la aasaasay 1949, sannad kaddib markii la sameeyay Israa’iil. Israa’iil waa dal ay leeyihiin Yuhuudda ku nool bartamaha shan dal oo Carab ah. Caadiyan, waxa ay u baahnaayeen hay’ad sida Mossad oo kale ah oo indhaha ku haysa cadawga xuduudaheeda.
Hay’addan waa hay’ad muhiim gaar ah u leh Israa’iil islamarkana howlgalo badan ka fulisa meel badan oo caalamka ka mid ah.
Dhaqanka Mossad ayaa ah in ay u diyaargaroobaan halisaha waa wayn, dhaqankaas oo ka imanaya xaalado adag oo jiray waqtigaas la aasaasayay hay’addan.
Taariikhda Israa’iil ama dagaal ayay kula jiraan dalalka Carabta ama xaalad colaad ah ayuu ku jiray. Maanta, Israa’iil waa quwad wayn, hasayeeshee dhaqanka Mossad waxba iskama badelin.
3. Hay’adda sirdoonka Britain ee MI6
MI6 waa hay’adda sirdoonka ee dalka Britain, waana hay’ad aad u awood badan.
Hay’adani ayaa waxaa xarun u ah magaalada London, waxaana la asaasay 4 bishii July 1909.
Hay’adan ayaa waxay uruurisaa oo xuuraantaa macluumaadka la xiriira amniga qaranka ee dalka iyo dibadaba.
Waxay MI6 ay ka mdi yihiin hay’addaha sirdoonka ee ugu awodda badan caalamka, waxaana imika madax ka ah Richard Moore.
4: ISI Pakistan
Hay’adda ISI waa hay’adda sirdoonka qaranka Pakistaan islamarkana waa udub dhaxaadka amniga qaranka dalkaasi.
Hay’adda ISI waxaa xarun u ah magaalada Islamabad waxaana la asaasay sanaddii 1948, islamarkana waxaa hadda madax ka ah Nadeem Anjum.
Hay’adan ayaa lagu tilmaamaa mid awood badan ku leh dalka Pakistaan, waana hay’adda ay ku tashadaan shacabka iyo madaxda dalkaasi.
GRU waa hay’adda sirdoonka Ruushka islamarkana waxaa la asaasay sanaddii 1992.
Waxaa hay’adan la asaasay ka dib burburkii midowgii sofiyeet 1990 waxa ayna badashay hay’addii awoodda badnayd ee KGB.
Hay’adan ayaa waxaa ays ii xoogeysatay markii uu xilka madaxnimada Ruushka uu la wareegay madaxwayne Purin.